“MARABOOB AYEY INAGU NOQDEEN!” – hogaanka.org
Huawei tech would risk UK-US intelligence ties, official says
“MARABOOB AYEY INAGU NOQDEEN!”
Faalo Kooban hadii aan ka dhiibto doodan waxaa aan filayaa in ay doodani tahay mid ka mida doodaha arintan lagaga hadlo.
Waxaa ka qaybgaley dad ku kala duwan fikirka guud ee qadiyada wada hadala Somaliland iyo Somaliya, aqoonta,waayo aragnimada iwm.
Professor Samater, waa aqoon yahan sare oo Somalilander ah dhaliisha kowaad ee wax uu hor dhigo
Kofi Atta Annan cida dayacdey isaga ayaa kow ka ah.Markaa hada waxaa la gudboon in kow ka noqdo cida boodhka ka jafeysa ee taariikhda Somaliland ee wakhtigii hore,wakhtigii gumeysiga,wakhtigii xoriyada midowgii labada gobol,xiligii Siyaad Bare, ilaa Maanta.
Waxaa aynu ognahay in uu buugagtii uu qorey ay ka mid ahaa tariikhdii madaxweynihii ugu horeyey ee Somaliya Adam Cade.
Arintaasi waxay markhaati u tahay in siyaasiinta,aqoon yahanada iyo waxgaradka Somalilanderka ahi iney yihiin kuwa dayaca ugu weyn ee qadiyada Somaliland in ay ka muuqato caalanka in ay yihiin iyaga.
The Way To Salvation Previous
Huawei tech would risk UK-US intelligence ties, official says Next